Oovimba be-UNISWAP - Iphepha 4 le-5
Ukungatshintshi (i-UNIUSD) Ixabiso linokunyuka liye kumaNqanaba eNkxaso kwi $ 15
Uhlalutyo lwamaxabiso olungatshintshiswanga-nge-24 kaJuni
Ukungakwazi ukophula i-15 lexabiso lamaxabiso ngeebhere, amaxabiso angatshintshiswanga anokunyuka aye kwi-21, i-27 yeedola kunye ne-34 lamaxabiso exabiso. Kwimeko apho iibhere zikwazile ukwenza uxinzelelo lokwephula inqanaba lenkxaso yeedola ezili-15, ixabiso linokuhla liye kwinqanaba lokuxhasa kwinqanaba leedola ezili-12 kunye nele-9.
Amanqanaba okumelana: $ 21, $ 27, $ 34
Amanqanaba enkxaso: $ 15 $ 12, $ 9
Kwimbonakalo yexesha elide, i-Uniswap yi-bearish. Umfutho we-Bearish uyaqhubeka kwintengiso ye-Uniswap. Inqanaba lenkxaso le- $ 21 alinakubamba ixabiso, lingene ngaphakathi laze lawa kwinqanaba lokuxhasa le- $ 15. Ixabiso lizama ukubuyela umva ngalo mzuzu. Uxinzelelo lweenkomo luzama ukutyhala ixabiso libuyele kwinqanaba lokuxhasa le- $ 15.
Ungatshintshi itshathi yemihla ngemihla, nge-24 kaJuni
Ukungaguquguquki kuyaqhubeka nokuthengisa kungaphantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA abonisa ukwanda kwefuthe le-bearish. Umndilili wokuhamba ngokukhawuleza (ama-9 amaxesha e-EMA) ungaphantsi komndilili wokuhamba kancinci (amaxesha angama-21 EMA). Ukungakwazi ukophula i-15 lexabiso lamaxabiso ngeebhere, amaxabiso angatshintshiswanga anokunyuka aye kwi-21, i-27 yeedola kunye ne-34 lamaxabiso exabiso. Kwimeko apho iibhere zikwazile ukwenza uxinzelelo lokwephula inqanaba lenkxaso yeedola ezili-15, ixabiso linokuhla liye kwinqanaba lokuxhasa kwinqanaba leedola ezili-12 kunye nele-9. Nangona kunjalo, iSalathiso saMandla esiNxulumene sigoba kwinqanaba lama-30 elibonisa uphawu lokuthenga.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-Uniswap yi-bearish. Iibhere zifumana amandla kwinqanaba lokumelana ne- $ 29 kwaye intshukumo ye-bearish iyaqhubeka. Kwangelo xesha, amandla ebhere ayonyuka kwaye yehla kwinqanaba lokuxhasa le- $ 21. Ukwehla kwexabiso ukuvavanya inqanaba lenkxaso kwi-15 yeedola.
Ungatshintshi itshathi yeeyure ezi-4, ngoJuni 24
Ukungatshintshiswanga kukurhweba phakathi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA, ixesha lesalathiso samandla esi-14 sikumanqanaba angama-50 okugoba ukubonisa uphawu lokuthenga.
Ukungatshintshi (UNIUSD) Ixabiso: Ngaba kuyakubakho ukuPhuka okuBulalayo kwinqanaba le- $ 26?
Ukuhlaziywa: 17 Juni 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso olungatshintshiswanga-nge-17 kaJuni
Kwimeko apho iibhere zikwazile ukwenza uxinzelelo lokwephula inqanaba lenkxaso le- $ 21, ixabiso linokuhla liye kwinqanaba lokuxhasa kwinqanaba leedola ezili-15 kunye nele- $ 12. Ukusilela ukophula inqanaba lama-21 eedola ngamabhere, amaxabiso angatshintshiswanga anokunyuka aye kuma- $ 26, $ 30 nakumaxabiso ama- $ 37.
Amanqanaba enkxaso: $ 21, $ 15 $ 12
Ukungatshintshiswanga kukungagungqi kwimbonakalo yexesha elide. Iibhere zisabambe imakethi engatshintshiyo nangona inomfutho ophantsi. Uxinzelelo lweenkomo luzama ukutyhala ixabiso elingaphezulu kwenqanaba lokuchasana le- $ 26 kodwa alikwazi ngenxa yokuhlangana kwinqanaba. Iibhere zisaza kuqokelela uxinzelelo oluya kwanela ukwehlisa inqanaba lenkxaso ye-21. Ixabiso lixabisa ngaphakathi kwe- $ 26 kunye ne- $ 21 kumanqanaba.
Itshathi yemihla ngemihla ye-UNIUSD, nge-17 kaJuni
Ukungaguquguquki kuhlala kungaphantsi kwee-EMA ezimbini, qhubeka urhweba ngezantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA abonisa amandla e-bearish. Umndilili wokuhamba ngokukhawuleza (ama-9 amaxesha e-EMA) ungaphantsi komndilili wokuhamba kancinci (amaxesha angama-21 EMA). Kwimeko apho iibhere zikwazile ukwenza uxinzelelo lokwephula inqanaba lenkxaso le- $ 21, ixabiso linokuhla liye kwinqanaba lokuxhasa kwinqanaba leedola ezili-15 kunye nele- $ 12. Ukusilela ukophula inqanaba lama-21 eedola ngamabhere, amaxabiso angatshintshiswanga anokunyuka aye kuma- $ 26, $ 30 nakumaxabiso ama- $ 37. Nangona kunjalo, iSalathiso saMandla esiNxulumene sigoba kwinqanaba lama-40 elibonisa uphawu lokuthenga.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, ukungatshintshiswanga kuyahluka. Iibhere ziphulukana namandla kwinqanaba lenkxaso le- $ 21 kwaye intshukumo ye-bearish ayinakuqhubeka. Ngendlela efanayo, amandla eenkomo abuthathaka kwaye awakwazanga ukwahlula inqanaba lokumelana ne- $ 26. Ixabiso lixabisa ngaphakathi kwe- $ 26 kunye nexabiso lama- $ 21.
Itshathi yeeyure ezi-4 ze-UNIUSD, nge-17 kaJuni
Ukungatshintshi kuyanda ngaphezulu kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA, ixesha lesalathiso samandla esimalunga ne-14 ikumanqanaba angama-50 eguqa phantsi ukubonisa umqondiso wokuthengisa onokubuyela umva.
Ukungaguquguquki (UNIUSD) Ukutsala ubuyela kwiNqanaba lamaRandi angama-21 ngaphambi kokuba iBullish Trend iqhubeke
Ukuhlaziywa: 10 Juni 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso olungatshintshiswanga-nge-10 kaJuni
Xa uxinzelelo lweebhere lonyuka ngakumbi ukophula inqanaba lenkxaso yeedola ezingama-21, amaxabiso anokuhla aye kwinqanaba lokuxhasa kwinqanaba leedola ezili-15 kunye nele-12. Kwimeko apho iinkunzi zeenkomo zikhusela inqanaba lenkxaso le- $ 21, amaxabiso angaguqukiyo anokunyuka aye kuma- $ 29, $ 34 kunye namaxabiso ama- $ 39.
Amanqanaba okumelana: $ 29, $ 34, $ 39
Ukungatshintshiswanga kukungagungqi kwimbonakalo yexesha elide. Ukuhamba kwe-bullish okubangelwe nge-24 kaMeyi ngokwenziwa kwekhandlela lokugubungela ikhandlela akunakuqhubeka. Ukukhula ngamandla kwaba buthathaka xa kudibana ukudibana kwinqanaba lama- $ 29 lokumelana. Ixabiso elingatshintshiyo liyehla kwinqanaba lenkxaso le- $ 21 ebonisa ukuba iibhere zilawula intengiso ye-Uniswap.
Itshathi yemihla ngemihla ye-UNIUSD, nge-10 kaJuni
Ukungatshintshiswanga kuye kwawela ii-EMA ezimbini ezantsi kwaye kuyathengiswa ngezantsi kwamaxesha e-9 EMA ebonisa ukonyuka kwamandla ebhere. Umndilili wokuhamba ngokukhawuleza (ama-9 amaxesha e-EMA) ungaphantsi komndilili wokuhamba kancinci (amaxesha angama-21 EMA). Xa uxinzelelo lweebhere lonyuka ngakumbi ukophula inqanaba lenkxaso yeedola ezingama-21, amaxabiso anokuhla aye kwinqanaba lokuxhasa kwinqanaba leedola ezili-15 kunye nele-12. Kwimeko apho iinkunzi zeenkomo zikhusela inqanaba lenkxaso le- $ 21, amaxabiso angaguqukiyo anokunyuka aye kuma- $ 29, $ 34 kunye namaxabiso ama- $ 39. Isalathiso samandla esihlobo sigoba kumanqanaba angama-40 abonisa umqondiso wokuthengisa.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, ukungatshintshiswanga kuyenziwa. Intshukumo ye-bearish ayinakuqhubeka njengoko iibhere ziphulukana namandla kwinqanaba lenkxaso le- $ 21. Ipateni yekhandlela laseMarubozu kwaye i-Uniswap inyuka ngokuthe chu ukuya kwinqanaba lama- $ 29. Iinkunzi zeenkomo zibuyisela ixabiso kwi-bullish mkhuba okwangoku.
Ukungatshintshiswanga kukurhweba phakathi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA, ixesha lesalathiso samandla esi-14 sikumanqanaba angama-50 agobileyo ukubonisa umqondiso wokuthengisa onokuba sisitshixo.
Ukungatshintshi (UNIUSD) Ixabiso lingena kwiNqanaba lama- $ 26, lijolise kwi- $ 37
Ukuhlaziywa: 27 May 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso olungatshintshiswanga-ngoMeyi 27
Ukonyuka koxinzelelo lweenkunzi zokuphula inqanaba lokumelana ne- $ 30 kungakhokelela ekunyukeni kwamaxabiso kwinqanaba lokumelana kwinqanaba lama- $ 37 kunye ne- $ 43. Kwimeko apho iibhere zikhusela inqanaba lokumelana ne- $ 30, amaxabiso angaguqukiyo anokuhla aye kuthi ga kwi-26, $ 21 nakwi-15 lamaxabiso
Amanqanaba okumelana: $ 30, $ 37, $ 43
Amanqanaba enkxaso: $ 26, $ 21, $ 15
Ukungatshintshiswanga kukunyusa ixesha elide. Iibhere zilawula imarike kwiiveki ezimbini ezidlulileyo. Iingqekembe zafumana inkxaso kwi-15 yeedola. Ikhandlela elikhuselayo elikhuselayo liyavela elibangele imeko yokunyuka. Ingqekembe inyuka kwaye ingene kwinkxaso yokuchasana namandla. Kukho utyekelo lokonyuka okungaphezulu kwexabiso.
Ungatshintshi itshathi yemihla ngemihla, ngoMeyi 27
Ukungaguquguquki ukuwela ngaphezulu kwee-EMA ezimbini kwaye kuyathengiswa ngaphezulu kwamaxesha e-9 EMA ebonisa ukonyuka komfutho weenkunzi, kunye nomndilili wokuhamba ngokukhawuleza (amaxesha ama-9 e-EMA) kukuzama ukuwela umndilili wokuhamba kancinci (amaxesha angama-21 EMA) ejonge phezulu. Ukonyuka koxinzelelo lweenkunzi zokuphula inqanaba lokumelana ne- $ 30 kungakhokelela ekunyukeni kwamaxabiso kwinqanaba lokumelana kwinqanaba lama- $ 37 kunye ne- $ 43. Kwimeko apho iibhere zikhusela inqanaba lokumelana ne- $ 30, amaxabiso angatshintshiswanga anokuhla aye kuma- $ 26, $ 21 nakwi- $ 15 amanqanaba amaxabiso. Isalathiso saMandla esiNxulumene sigoba kwinqanaba lama-60 elibonisa uphawu lokuthenga.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, ukungatshintshiswanga kuyenziwa. Ukungatshintshiswanga kwakungu-bearish kwiiveki ezimbini ezidlulileyo kwitshathi ye-4hour, uxinzelelo lwe-bearish lwalukhula kwaye ixabiso lehlile laya kwinqanaba eliphantsi leedola ezili-12. I-crypto ayikwazanga ukwehla ngaphaya kwenqanaba ngenxa yokuphazamiseka kwiinkunzi kwinqanaba le-12 leedola. Oku kuphazamiseka kuyaqatshelwa ngokwenziwa kwekhandlela le-pin bar kwinqanaba elikhankanyiweyo.
Ungatshintshi itshathi yeeyure ezi-4, ngoMeyi 27
Ukungatshintshiswanga kuthengiswa ngaphezulu kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA, ixesha lesalathiso samandla esi-14 sikumanqanaba angama-40 ukugoba ukubonisa ukuthengisa umqondiso onokuba kukubuyela umva.
Ukungatshintshi (i-UNIUSD) Ixabiso linokuthi lihlawule kwi-21 yeNqanaba leNkxaso
Ukuhlaziywa: 20 May 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso olungatshintshiswanga-ngoMeyi 20
Ukonyuka okuthe kratya koxinzelelo lweebhere lokwephula inqanaba lenkxaso yeedola ezingama-21 kungakhokelela ekunciphiseni kwexabiso kwinqanaba lokuxhasa kwinqanaba leedola ezili-15 kunye ne- $ 12. Kwimeko apho iinkunzi zeenkomo zikhusela inqanaba lenkxaso le- $ 21, amaxabiso angaguqukiyo anokunyuka aye kuma- $ 26, $ 30 nakumaxabiso ama- $ 37.
Amanqanaba enkxaso: $ 21, $ 15, $ 12
Ukungatshintshiswanga kukungagungqi kumbono wexesha elide. I-crypto yayiqala kwinqanaba lokumelana ne- $ 43 kunye nenqanaba lokuxhasa le- $ 37 yeeveki ezimbini ezidlulileyo. Ngomhla we-10 kuMeyi, uxinzelelo lwabathengisi lwanda kwaye inqanaba lenkxaso le- $ 37 langena. Ixabiso lavavanya inqanaba lenkxaso le- $ 30 ukubuyisa umva ukuphinda ubonakalise inqanaba lokumelana ne- $ 37. Ngomhla we-19 kaMeyi, kwavela ikhandlela elikhulu le-bearish yemihla ngemihla kwaye amanqanaba enkxaso ye- $ 30 kunye ne- $ 26 yangena ezantsi ukuvavanya inqanaba lamaxabiso angama- $ 21. Ixabiso liyabuyela umva.
Itshathi yemihla ngemihla ye-UNIUSD, ngoMeyi 20
Ukungaguquguquki kuyaqhubeka kurhwebo lwayo ngezantsi kwee-EMA ezimbini kumgama obonisa ukwanda kwamandla eebhere, kunye nomndilili wokuhamba ngokukhawuleza (ama-9 amaxesha e-EMA) ungaphantsi komndilili wokuhamba kancinci (amaxesha angama-21 e-EMA). Ukonyuka okuthe kratya koxinzelelo lweebhere lokwephula inqanaba lenkxaso yeedola ezingama-21 kungakhokelela ekunciphiseni kwexabiso kwinqanaba lokuxhasa kwinqanaba leedola ezili-15 kunye ne-12. Kwimeko apho iinkunzi zeenkomo zikhusela inqanaba lenkxaso le- $ 21, amaxabiso angaguqukiyo anokunyuka aye kuma- $ 26, $ 30 nakumaxabiso ama- $ 37. Isalathiso saMandla esiNxulumene sigoba kummandla ogqithileyo (kumanqanaba angama-20) abonisa uphawu lokuthenga.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-Uniswap iphantsi. Ngokukhawuleza emva kokuqhekeka kwengqekembe evela kumda ojikelezayo, abathengisi bathathe imarike ye-Uniswap kunye nokuhla kwexabiso kwinqanaba lokuxhasa kwi-21 yeedola emva kokophula i-30 kunye ne-25 yeedola. Kukho utyekelo lokuba ixabiso linokubuyela umva kwinqanaba lama-21 eedola njengoko ipateni yebhandlela lepinki ivela.
Itshathi yeeyure ezi-4 ze-UNIUSD, ngoMeyi 20
Ukungatshintshiswanga kuthengiswa ngezantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA, ixesha lesalathiso samandla esi-14 sikumanqanaba angama-30 okugoba ukubonisa uphawu lokuthenga.
Ukungatshintshiswanga (i-UNIUSD) amaxabiso aqhekeza amaNqanaba ama-37 eedola, amaNqanaba angama-26 eedola anokuthi afikeleleke
Ukuhlaziywa: 13 May 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso olungatshintshiswanga-ngoMeyi 13
Xa iibhere zifumana uxinzelelo ngakumbi lokwephula inqanaba lenkxaso leedola ezingama-33, ixabiso liya kuncipha liye kwinqanaba lokuxhasa kwi- $ 26 enokuthi inyuke iye kwi-21level. Kwimeko apho iibhere azinakho ukophula inqanaba lenkxaso leedola ezingama-30, ixabiso elingatshintshiyo linokunyuka liye kuma- $ 37, $ 43 nakwi- $ 50 kwinqanaba lamaxabiso.
Amanqanaba okumelana: $ 37, $ 43, $ 50
Amanqanaba enkxaso: $ 30, $ 26, $ 21
Ukungatshintshi kukuhamba kwe-bearish kwimbono yexesha elide. Idabi phakathi kwabathengi kunye nabathengisi likhokelele kwintshukumo ye-whipsaw kwintengiso ye-Uniswap kwinqanaba lokumelana ne- $ 43 kunye nenqanaba lokuxhasa i-37 yeedola kwiiveki ezimbini ezidlulileyo. Ngomhla we-10 kuMeyi, uxinzelelo lwabathengisi lwanda kwaye inqanaba lenkxaso le- $ 37 langena. Ixabiso lavavanya inqanaba lenkxaso le- $ 30.
Itshathi yemihla ngemihla ye-UNIUSD, ngoMeyi 13
Ukungatshintshiswanga kuthengiswa ngezantsi kwee-EMA ezimbini kumgama obonisa ukwanda kweebhere, kunye nomndilili wokuhamba ngokukhawuleza (ama-9 amaxesha e-EMA) uwela umndilili wokuhamba kancinci (amaxesha angama-21 e-EMA). Xa iibhere zifumana uxinzelelo ngakumbi lokwephula inqanaba lenkxaso leedola ezingama-33, ixabiso liya kuncipha liye kwinqanaba lokuxhasa kwi- $ 26 enokuthi inyuke iye kwi-21level. Kwimeko apho iibhere azinakho ukophula inqanaba lenkxaso leedola ezingama-30, ixabiso elingatshintshiyo linokunyuka liye kuma- $ 37, $ 43 nakwi- $ 50 kwinqanaba lamaxabiso. Isalathiso saMandla esiNxulumene sigoba kumanqanaba angama-40 abonisa umqondiso wokuthengisa.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-Uniswap yi-bearish. Kwakukho intshukumo eyahlukeneyo kwimakethi engatshintshiswanga kwiveki ephelileyo kwitshathi yeeyure ezi-4 ngaphakathi kwe- $ 43 kunye ne- $ 37 yenqanaba lamaxabiso. Ngomhla we-12 kaMeyi, iibhere zafumana uxinzelelo ngakumbi kwaye zaphula inqanaba lenkxaso kwi $ 37. Ixabiso okwangoku libonisa kwinqanaba lokuxhasa kwi- $ 30.
Itshathi yeeyure ezi-4 ze-UNIUSD, ngoMeyi 13
Ukungatshintshiswanga kukurhweba ngezantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA, ngelixa i-EMA yangaphambili izama ukuwela kwicala elingaphambili. Ixesha lesalathiso samandla esimalunga ne-14 sikumanqanaba angama-40 agobileyo ukubonisa uphawu lokuthengisa.
Uniswap (UNIUSD) Ixabiso; Inqanaba lokumelana ne-43 yeedola, amaxabiso anokuhla
Ukuhlaziywa: 6 May 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso olungatshintshiswanga-ngoMeyi 06
Xa iinkunzi zenkomo zifumana uxinzelelo ngakumbi lokophula inqanaba lokumelana ne- $ 43, ixabiso liya kunyuka liye kwinqanaba lokumelana ne- $ 50 enokuthi inyuke iye kwinqanaba le- $ 63. Kwimeko apho iibhere zonyusa uxinzelelo lokwephula inqanaba lenkxaso le- $ 37, amaxabiso angaguqukiyo anokuhla aye kuthi ga kwixabiso lamaxabiso angama- $ 30 kunye nama- $ 26.
Amanqanaba okumelana: $ 43, $ 50, $ 63
Amanqanaba enkxaso: $ 37, $ 30, $ 26, $ 21
Ukungatshintshi kukwimo yokutshintsha kwimbonakalo yexesha elide. Abathengi batyhala i-Uniswap ukuvavanya inqanaba lokumelana ne-43 yeedola kuqala ngo-Epreli 28. Inqanaba lokumelana ne-43 yeedola liphethe ixabiso. Ukusukela ngoko, uxinzelelo lwabathengi lubuthathaka kwaye alunakho ukwahlula inqanaba lamaxabiso e-43. Umfutho weebhere ubonakala uphantsi kwaye awunakulichitha inqanaba lenkxaso le- $ 37. Ixabiso lixabisa ngaphakathi kwe- $ 43 kunye ne- $ 37 yamanqanaba amaxabiso.
Itshathi yemihla ngemihla ye-UNIUSD, ngoMeyi 06
Ukungatshintshiswanga kuthengiswa ngaphezulu kwee-EMA ezimbini ezikufutshane ezibonisa ukwehla kwamandla eenkunzi, kunye nomndilili wokuhamba ngokukhawuleza (ama-9 amaxesha e-EMA) uhlala ungaphezulu komndilili wokuhamba kancinci (amaxesha angama-21 e-EMA). Xa iinkunzi zeenkomo zifumana uxinzelelo ngakumbi lokophula inqanaba lokumelana ne- $ 43, ixabiso liya kunyuka liye kwinqanaba lokumelana ne- $ 50 enokunyuka iye kuthi ga kwinqanaba lama- $ 63. Kwimeko apho iibhere zonyusa uxinzelelo lokwephula inqanaba lenkxaso le- $ 37, amaxabiso angaguqukiyo anokuhla aye kuthi ga kwixabiso lamaxabiso angama- $ 30 kunye nama- $ 26. Isalathiso samandla esihlobo sigoba ngamanqanaba angama-60 abonisa umqondiso wokuthengisa.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, ukungatshintshiswanga kuyahluka. Kukho ukungazinzi okuphantsi kwintengiso ye-Uniswap ngenxa yeenkomo ezisezantsi kunye noxinzelelo lweebhere ezisezantsi. Inqanaba lokumelana ne- $ 43 liphethe ixabiso, kwakhona, inqanaba lenkxaso le- $ 37 lithintela ukuhla kwexabiso. Ukuhamba okungafaniyo kunokuqhubeka ngokude kube njengamanqanaba akhankanyiweyo.
Itshathi yeeyure ezi-4 ze-UNIUSD, ngoMeyi 06
Ukungatshintshi kuhamba ngaphezulu kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA kwaye ii-EMA ezimbini zinxibelelene njengophawu lokuba ukuhamba okuqhubekayo kuyaqhubeka.
Ukungatshintshiswanga (i-UNIUSD) Amaxabiso okuqhekeka kweNqanaba eliPhikisayo lokuBala, ama-50 eedola anokuthi afikeleleke
Uhlalutyo lwamaxabiso olungatshintshiswanga-Epreli 29
Kwimeko apho inqanaba lokumelana ne- $ 44 liphethe, ixabiso liya kubuyisa inqanaba lenkxaso kwi $ 37 enokuthi inyuke iye kwi-30 kunye ne-26 yenqanaba lenkxaso. Xa iinkunzi zenkomo zonyusa uxinzelelo lokwephula inqanaba lokumelana ne- $ 44, ixabiso elingatshintshiyo linokunyuka liye kuma- $ 50 kunye nama- $ 63 kwinqanaba lamaxabiso.
Amanqanaba okumelana: $ 44, $ 50, $ 63
Ukungatshintshiswanga kukunyusa ixesha elide. Iinkunzi zigcina uxinzelelo kwaye ixabiso liyonyuka ngokufanelekileyo. Inqanaba lenkxaso leedola ezingama-30 kwaye inqanaba lokuchasana kwiveki ephelileyo laphulwe ziinkunzi. Ixabiso lavavanya inqanaba lokumelana ne- $ 44 izolo. Ixabiso liyabuyela umva ngalo mzuzu.
Ungatshintshi itshathi yemihla ngemihla, Epreli 29
Umndilili wokuhamba ngokukhawuleza (ama-9 amaxesha e-EMA) ugcina isikhundla sawo ngaphezulu komndilili wokuhamba kancinci (amaxesha angama-21 e-EMA). Ukungatshintshiswanga kuthengiswa ngaphezulu kwee-EMA ezimbini kumgama obonisa ukwanda kwamandla eenkomo. Kwimeko apho inqanaba lokumelana ne- $ 44 liphethe, ixabiso liya kubuyisa inqanaba lenkxaso kwi $ 37 enokuthi inyuke iye kwi-30 kunye ne-26 yenqanaba lenkxaso. Xa iinkunzi zenkomo zonyusa uxinzelelo lokwephula inqanaba lokumelana ne- $ 44, ixabiso elingatshintshiyo linokunyuka liye kuma- $ 50 kunye nama- $ 63 kwinqanaba lamaxabiso. Isalathiso samandla esihlobo sigoba ngamanqanaba angama-70 abonisa umqondiso wokuthengisa.
Kwintengiso yeeyure ezi-4, ukungatshintshiswanga kuyenziwa. Ukungaguquguquki kudlala ngendlela ekuxelwe ngayo kwiveki ephelileyo. Inqanaba lokuxhathisa langaphambili le- $ 37 liphendukele kwinqanaba lokuxhasa ngenxa yokunyuka koxinzelelo lweenkunzi. Kukho utyekelo lokunyuka kwexabiso lokungaguquki. Okwangoku, kuqhuba ukubuyisela ixabiso.
Ungatshintshi itshathi yeeyure ezi-4, ngo-Epreli 29
Ukungaguquguquki kuthengisa ngaphezulu kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA njengophawu lokuhamba ngenkuthalo. Nangona kunjalo, ixesha lesalathiso samandla esimalunga ne-14 sikhomba kumanqanaba angama-70 abonisa umqondiso wokuthengisa.
Ukungaguquguquki (i-UNIUSD) Ixabiso liyasokola ekuPhuleni inqanaba lokuphikiswa nge-37
Ukuhlaziywa: 22 April 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso olungatshintshiswanga-Epreli 22
Xa iinkunzi zeenkomo zigcina okanye zifumana uxinzelelo ngakumbi lokophula inqanaba lokumelana ne- $ 37, ixabiso elingaguqukiyo linokunyuka liye kuma- $ 44 kunye nama- $ 50 kwinqanaba lamaxabiso. Ukungakwazi ukophula inqanaba lokumelana ne- $ 37 ziinkunzi kungatyhala ingqekembe iye kwinqanaba lokuxhasa kwi- $ 30 kunye ne- $ 26, ukwehla okungaphezulu kunokuvavanya inqanaba lamaxabiso angama- $ 24.
Amanqanaba okumelana: $ 37, $ 44, $ 50
Kwimbonakalo yexesha elide, i-Uniswap inyusa. Iinkunzi zenkomo zibambelele kwimarike engatshintshiswanga. Iibhere zazizama ukuhla phantsi kwexabiso elingaphantsi kwenqanaba lenkxaso leedola ezingama-30 kodwa iinkunzi zeenkomo zikhusela inqanaba elikhankanyiweyo. Ukuqhawuka kwe-bearish okwenzeka ngo-Epreli 18 kwenze ixabiso lokuvavanya inqanaba lenkxaso kwi-26 yeedola kodwa amandla e-bearish akakwazanga ukugcina ixabiso kwinqanaba. Ingqekembe yatyhalwa yaya kuthi xhaxhe kwinqanaba lama- $ 37 ziinkunzi.
Itshathi yemihla ngemihla ye-UNIUSD, Epreli 22
Amaxesha ama-9 ama-EMA ahlala ngaphezulu kwamaxesha angama-21 e-EMA kwaye ukungatshintshisiswa kuthengiswa ngaphezulu kwee-EMA ezimbini kumgama obonisa intengiso yentengiso. Xa iinkunzi zeenkomo zigcina okanye zifumana uxinzelelo ngakumbi lokophula inqanaba lokumelana ne- $ 37, ixabiso elingaguqukiyo linokunyuka liye kuma- $ 44 kunye nama- $ 50 kwinqanaba lamaxabiso. Ukungakwazi ukophula inqanaba lokumelana ne- $ 37 ziinkunzi kungatyhala ingqekembe iye kwinqanaba lokuxhasa kwi- $ 30 kunye ne- $ 26, ukwehla okungaphezulu kunokuvavanya inqanaba lamaxabiso angama- $ 24. Isalathiso saMandla esiNxulumene sigoba kwinqanaba lama-70 elibonisa umqondiso wokuqina wokuthenga.
Kwintengiso yeeyure ezi-4, ukungatshintshiswanga kuyenziwa. Kwiveki ephelileyo, ingqekembe idibanisa ixesha elifutshane kwinqanaba lokuxhasa lama- $ 30. Iinkunzi zifumana uxinzelelo ngakumbi kwaye zityhala ixabiso ukuya kwinqanaba lokumelana ne- $ 37. Okwangoku, ixabiso lisokola ukuphula inqanaba elikhankanyiweyo.
Itshathi yeeyure ezi-4 ze-UNIUSD, ngo-Epreli 22
Ukungaguquguquki kuthengisa ngaphezulu kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA njengophawu lokuhamba ngenkuthalo. Nangona kunjalo, ixesha lesalathiso samandla esihlobo se-14 sikhomba kumanqanaba angama-70 abonisa umqondiso wokuqina wokuthenga.
Ukungatshintshi (i-UNIUSD) amaxabiso abuyela kwi-34 yenqanaba leNkxaso, isihloko esiya kwi-39
Uhlalutyo lwamaxabiso olungatshintshiswanga-Epreli 15
Ukuba iinkunzi zenkomo zigcina okanye zifumana uxinzelelo ngakumbi lokophula inqanaba lokuchasana le- $ 39, ixabiso elingaguqukiyo linokunyuka liye kuma- $ 44 kunye nama- $ 50 kwinqanaba lamaxabiso. Ukusilela ukwaphula inqanaba lokumelana ne- $ 39 ziinkunzi kungakhokelela ekuhambeni kwe-bearish ukuya kwinqanaba lenkxaso kwi-34 kunye ne- $ 29, enokuthi inyuke iye kwi-24.
Amanqanaba okumelana: $ 39, $ 44, $ 50
Amanqanaba enkxaso: $ 34, $ 29, $ 24
Ukungatshintshiswanga kukunyusa ixesha elide. Ingqekembe yenqabile ukuthobela iipateni ezimbini zetshathi ephezulu eyenziwe kwiiveki ezimbini ezidlulileyo kwitshathi yemihla ngemihla. Iinkunzi ziphazamisa ukuhamba kwe-bearish kwexabiso ngaphambi kokuba lifike kwinqanaba lokuxhasa le- $ 24. Nge-12 ka-Epreli, kwavela ikhandlela elinamandla kunye nelikhulu lemihla ngemihla kunye nexabiso elonyukayo ukuya kwinqanaba lokumelana ne- $ 39.
Ungatshintshi itshathi yemihla ngemihla, ngo-Epreli 15
Amaxesha e-9 i-EMA iwele amaxesha angama-21 e-EMA ejonge phezulu kwaye i-Uniswap ithengisa ngaphezulu kwee-EMA ezimbini kumgama obonisa intengiso ye-bullish. Ukuba iinkunzi zenkomo zigcina okanye zifumana uxinzelelo ngakumbi lokophula inqanaba lokuchasana le- $ 39, ixabiso elingaguqukiyo linokunyuka liye kuma- $ 44 kunye nama- $ 50 kwinqanaba lamaxabiso. Ukusilela ukwaphula inqanaba lokumelana ne- $ 39 ziinkunzi kungakhokelela ekuhambeni kwe-bearish ukuya kwinqanaba lenkxaso kwi-34 kunye ne- $ 29, enokuthi inyuke iye kwi-24. Isalathiso saMandla esiNxulumene sigoba kwinqanaba lama-70 elibonisa umqondiso wokuqina wokuthenga.
Kwintengiso yeeyure ezi-4, ukungatshintshiswanga kuyenziwa. Kungekudala emva kokubuyela umva ukuzama kwakhona inqanaba lokuchasana le- $ 29, ixabiso laqala ukudityaniswa kwinqanaba lexabiso lama- $ 29 ngaphezulu kweentsuku ezintathu. Nge-12 ka-Epreli, iinkunzi zeenkomo zonyuse uxinzelelo lwazo kwaye inqanaba lokumelana ne-34 yeedola laphulwe. Ukubuyiselwa kwexabiso kwenziwa. Ixabiso lisingise kwi $ 39 ngalo mzuzu.
Ungatshintshi itshathi yeeyure ezi-4, ngo-Epreli 15
Ukungatshintshiswanga kukurhweba ngaphezulu kwee-EMA ezimbini njengophawu lwentshukumo yokuqhubela phambili. Nangona kunjalo, ixesha lesalathiso samandla esi-14 sikhomba kumanqanaba angama-70 sibonisa umqondiso wokuthengisa onokubuyela umva.
← Entsha izithuba 1 ... 3 4 5 abaDala izithuba →